၂၁ ရာစုနည်းပညာခေတ်မှာ ရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်လာတဲ့ ငါတို့ကမ္ဘာ စတဲ့ ဘဝင်တွေနဲ့ရှင်သန်နေတဲ့ လူဆိုသူတွေဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတဲ့ မျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့ အလွန်မှုန်မွှားမွှား သတ္တဝါငယ်လေးကြောင့် ကျွမ်းထိုးမှောက်ခုံဖြစ်ကုန်ကြရတာ...
ပုထုဇဉ်လူသားမှန်သမျှ ကိုယ်နေထိုင်မှီခိုရာဇာတိကို အနည်းနှင့်အများ ချစ်ခင်မက်မောတာချည်းသာဖြစ်သည်။လူတွေမဆိုထားနှင့် အဟိတ်တိရစ္ဆာန်များတောင် သူတို့ကျက်စားခဲ့ရာ မွေးဖွားခဲ့ရာဒေသကို ခင်တွယ်ကြတာချည်းဖြစ်သည်။သည်တော့ အသိရှ...
【 ဆောင်းပါး 】 “၁၀ တန်းဆို အောင်မှလား”
ဖုန်းသံကြားသဖြင့် ဖြတ်ခနဲလန့်နိုးသွားခဲ့သည်။အချိန်ကိုကြည့်လိုက်တော့ သန်းခေါင်ထက်ပင် နက်နေပြီဟုဆိုနိုင်သော နံနက် ၁ နာရီ။ညက အရှိန်လေးနည်းနည်းရပြီးမှ အိပ်လိုက်ခြင်းကြောင့် အိပ်ရေးကျနေသဖြင့် မျက်လုံးကမပွင့်ချင်။အိပ်ချင်...
【 ဆောင်းပါး 】 “facebook ပေါ်မှ ငပေါများ”
ယနေ့ခေတ်လို မီဒီယာထွန်းကားမှုအားကောင်းသည့် ခေတ်ကာလမှာ facebook ပေါ်တက်ကာ ကလေးကလားရေးတတ်သည့် တစ်ချိန်က ရာထူးရာခံယူထားခဲ့သူတွေ၏ စာတွေကို မကြာခဏတွေ့မြင်ရသည်။ဒီလိုတွေမြင်ရတော့ တိုင်းပြည် ဘာကြောင့် အဖက်ဖက်ကနိမ့်ကျ...
【 ဆောင်းပါး 】 “မိုးဦး လေဦးနှင့် ကိုဗစ်”
ယခုရက်ပိုင်း မိုးဦး၏အငွေ့အသက်များ အစပြုလာသလို မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့်လည်း မိုးကမစဲတော့။ရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်ပြီး မိုးရွာသွန်းမှုများနှင့်အတူ အိမ်များ၊ တဲများ၊ အဆောက်အဦးများ ပြိုလဲမှုတွေ ရက်ပိုင်းအတွင်း ဖြစ်ပွားနေသည...
ထိုနေ့က ကျွန်တော် ခါတိုင်းလိုပင် 37...
မကြာမီ ဝါတွင်းသုံးလတာကာလအတွင်းသို့ ချည်းနင်းဝင်ရောက်တော့မည်ဖြစ်သည်။ယခုနှစ်တွင် ဝါထပ်သဖြင့် ဝါဝင်ကာလမှာ ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်နေ့ဖြစ်သည့် ဩဂုတ် ၃ ရက်မှ စကာ ဝါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ရဟန်း၊ သံဃာတော်များအတွက် ဝါထပ်သဖြင့် တစ်လနောက်ကျကာ...
“ဘယ်ကလာတာလဲ ? - မသိပါဘုရား။ဘယ်ကိုသွားမှာလဲ ? - မသိပါဘုရား” ဆိုတဲ့ အမေး-အဖြေလေး ၂ ခုဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက် တိုတောင်းတဲ့သတိပေးမှုလေးပါ။လူ့ဘဝကိုရလာကြတယ်။ဒီဘဝကို ဘယ်လိုရလာသလဲ။မိဖကမွေးလို့ ရလာတယ်လို့ ဖြေကြရုံကလွဲလို့...
"ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ သူကလူကြမ်းပဲဟာ၊ နှိပ...
ယခုတလော သတင်းစာဖတ်တိုင်း အမြဲတမ်းနီးပါးတွေ့နေရသည့်သတင်းမှာ နိုင်ငံရေးသတင်းလည်းမဟုတ်၊ စစ်ရေးသတင်းလည်းမဟုတ်၊ အားကစားသတင်းလည်းမဟုတ်။မကြားဝံ့မနာသာ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု သတင်းများပင်ဖြစ်သည်။ ဒီသတင်းတွေက တချို့သတင်းစာများ၏နောက်...